Somali news – Page 2 – Banaadir weyne
21 Febraayo, 2018 Xalay waxaa magaalada London lagu dilay labo wiil oo Soomaali ah, halka mid kalena si xun loogu dhaawacay. Dilalkan loo geysto dhalinyarada Soomaalida ayaa ah kuwo magaaladaas ku soo noqnoqday. Haddaba dhacdadi xalay ayaa Maxamed Cabdi Sandhere uu ka wareystay Koronto Aadan oo daris la ah qoysaska uu dhibku soo gaarey qaarkood. LOndon Killing – ...
20 Febraayo, 2018 Muqdisho – Maxakamadda Darajada 1-aad ee Ciidanka Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukuno isugu jira Dil iyo Darajo Qaadis ku ridday C/naasir Xoosh oo dilay EX. Abaanduulihii Ciidanka Badda Soomaaliyeed Siciid Aadan yuusuf (Siciid Mariino). Kadib dhagayesiga dacwadda loo haystay C/naasir Xoosh oo maalmahan ay maxakamadda hortaalay ayaa la soo geba gebeyeey iyadoo go’aan ay ka ...
Faah Faahinno Ka Soo Baxaya Dagaal Ka Dhacay Qoryooley
20 Febraayo, 2018 Qoryooley – Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal u dhaxeeyay Al Shabaab iyo Ciidamada DFS oo Xalay ka dhacay degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelaha Hoose. Dagaalkan ayaa yimid, kadib markii Al Shabaab ay weerar ku qaadeen fariinsin Ciidamada milateriga Soomaaliya ay ku leeyihiin gudaha degmadaasi. Waxaana la sheegay in halkaasi uu ka dhacay dagaal ...
Kenya: Ururada Macalimiinta oo dowlada ugu baaqay in macalimiinta laga soo saaro gobolka woqooyi bari ila laga xalinayo xaalada amaanka
19 Febraayo, 2018 Ururada Macalimiinta dalka Kenya ayaa dowllada ugu baaqay inay magdhaw siiso dhibanayashii iyo qoysaskii dadkooda ay dileen kooxda Al Shabab. Ururka qaran ee ay ku mideysanyihiin macaliimiinta ee KNUT iyo Ururka ay ku mideysanyihiin macalimiinta dugsiyada hoose ee KUPPET ayaa sido kale ka doonaya in guddiga adeega macalimiinta ee TSC inaysan talaaba ka qaadin macalimiinta ka ...
Al-Shabaab oo weeraray koloyo baabuur ciidan oo marayay duleedka magaalada Kismaayo
19 Febraayo, 2018 Al-Shabaab ayaa weerar jid gal ah ku qaaday ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa AMISOM oo marayay degaanka Buula Gaduud ee duleedka magaalada Kismaayo. Dadka degaanka ayaa inoo sheegay in weerarkan lala begsaday Ciidamo ka tirsan Maamulka Jubbaland iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM iyo Ciidamo cadaan ah, kuwaasi oo halkaasi ku socdaalayay. Wararka laga helayo degaanka ...
19 Febraayo, 2018 Muqdisho – Golaha Wasiirrada Xukuumadda Federaalka ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyay Maareeyaha Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka oo loo magacaabay Mudane Cabdi Sheekh Axmed, oo ah khabiir dhinaca isgaarsiinta iyo teknoolojiyada ah. Tallaabadan ayaa aasaas u ah dhismaha Guddiga Sare ee Hay’adda Isgaarsiinta oo lagu hawlanaa tan iyo markii uu madaxweynaha dalka uu saxiixay Xeerka Isgaarsiinta ...
19 Febraayo, 2018 Muqdisho – Taliyeyaasha Booliska, Nabadsugida iyo Asluubta ayaa la magacaabay, kaddib shir degdeg ah oo ay goor dhow yeesheen Golaha Wasiirada. Taliyaha Booliska ayaa loo magacaabay Bashiir Cabdi Maxamed, halka Taliyaha Nabadsugida loo magacaabay Xuseen Cusmaan Xuseen, halka Taliyaha Asluubta loo magacaabay Jen. Bashiir Maxamed Jaamac (Bashiir Goobe) oo horay xilkan u hayay. Bashiir Cabdi Maxamed ...
Wararkii ugu dambeeyay Ganacsiga Suuqa Bakaaraha oo maalintii labaad xiran
19 Febraayo, 2018 Muqdisho – Ganacsiga Suuqa Bakaaraha ayaa maalintii labaad u xiran shaqo joojin ay sameeyeen Ganacsatada Gobolka Banaadir, kaddib khilaaf soo kala dhex galay Ganacsatada iyo Wasaaradda Maaliyadda oo ka dhashay canshuur xad-dhaaf ah oo lagu soo rogay. Qeybihii Ganacsiga uu ka koobnaa Suuqa ayaa gebi ahaanba xiran, sida qeybaha lagu iibiyo jumlada iyo tafaariiq, qeybaha lagu ...
Galmudug Oo Baaq U Dirtay Beesha Caalamka
19 Febraayo, 2018 Dhuusamareeb – Madaxa Xuukuumadda Galmudug Sheekh Axmed Shaakir Cali Xasan ayaa ugu baaqay Beesha Caalamka iyo AMISOM in ay ka taageeraan la dagaalanka Xarakada Al Shabaab. Sheekh Axmed Shaakir Cali Xasan ayaa sheegay in Galmudug ay u baahan tahay in laga taageero ammaanka iyo xasiloonida deegaanadeeda. Waxaana uu tilmaamay in ka go’an tahay ka maamul ahaa ...
19 Febraayo, 2018 Muqdisho – uddoomiyaha Gobolka Benaadir ahna Duqa Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) ayaa kulan la yeeshay Guddiga Ganacsatada Gobolka, waxana ay ka wada hadleen sidii xal maan-gal ah loogu heli lahaa khilaafka ka dhashay canshuuraha. Guddiga Ganacsatada iyo Guddoomiyaha ayaa isla falan-qeeyey cabashada ka dhalatay canshuuraha laga hir geliyey Gobolka Benaadir, iyagoo isla qaatay ...
Maanta Waxaa Soo Gebagaboobayo Shirkii U Socday Dowladda Soomaaliya Iyo Kuwa Lagu Sheego ‘Dowlad Goboleedyada Soomaaliya’
Wasiirka Socdaalka Britian UK iyo Agaasimaha Guud ee HSJ aya kulan ku qaatay UK
Madaxda Maamulka Galmudug oo Muqdisho ku kulmay (Sawirro)
Madaxda Afrika oo qaatay istaraatijiyad looga baxayo maxkamada ICC
QM Oo Sheegtay In Imaaraadka Carabta Ay U Gurmatay Kumanaan Qoys Oo Soomaali Ah